Salwe ?Iskaashatada gadiidka gobolka Bari, tamar uma hayaan fulinta amarradii dowladda? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 14, 2013 4:57 b 0
Boosaso, September 14, 2013 – Iskaashatada gaadiidka dadweynaha u kala qaada xaafadaha Boosaso ee gobolka Bari ayaa cabasho ka muujiyey ammaro ka soo baxay maamulka Puntland, kuwaas oo khuseeya gaadiidkooda iyo nooca ay u shaqeeyaan.
Ammarada oo ah kuwa ay si wadajir ah u soo saareen wasaaradaha amniga, howlaha guud iyo gaadiidka, iyo taliska ciidamada booliska ee Puntland, ayaa waxaa lagu amrayey in ay darawalada basaska BL-ka loo yaqaan bedelaan halka ay ku leeyihiin daaqada dadweynuhu ka degaan.
Go?aanka wasaaradaha iyo ciidamada amniga ayaa la xiriiray illaalinta dadweynaha iyo nabad-gelyada jidadka Puntland, waxaana maamulku ugu baaqay gaadiidleyda in ay bedelaan daaqada dhinaca waddada baabuurtu ay ku leeyihiin oo ah mid khatar badan ka dhalato.
Afhayeenka iskaashatada gaadiidka dadweynaha ee gobolka Bari Cabdiraxmaan Salwe oo la hadlay Radio Daljir, waxaa uu sheegay in ay adag tahay in haatan la fuliyo amarradaas ay soo saareen ciidamada amaanka ee Puntland iyo wasaarada amniga iyo howlgaha guud.
? Annagu waan ogolaanay, laakiin waxaan dowladda si xushmad leh uga codsanaynaa in dadkaani yihiin dad tamar yar oo masaakiin ah, haddana qoladii hantiilayaasha iyo gaadiidlaydii waan isugu yeernay, howshan ka hor iman mayno, laakiin tamar ma hayno ee dowladdu qorshe ha keento? ayuu yiri Afhayeen Salwe.
26 bishii Agoosto ee ina dhaaftay ayaa shir ka dhacay Garoowe waxaa ka soo baxay amaro ay jeediyeen wasiirrada amniga, howlaha guud iyo gaadiidka iyo taliska ciidanka booliska, waxaana gaadiidlayda loo sheegay wixii ka dambeeya 10 bisha September cidii fulin weyda amaradaas in talaabo laga qaadi doono.
Maxamed Salaad Xaaji Dirir ayaa war-bixin ka diyaariyey baaqa Iskaashatada gobolka Bari (Dhegeyso)